Dirqaalee dogoggora ofumaan sirreessuu akka barreessitutti fifli. Ittaansuudhaan TOLE cuqaasi.
Gabatee baklka bu'insaa fayyadami
Osoo makinsa qubeewwanii qaxxaamura gabatee bakka buusuu keessatti kan walsimatu barreessite, makinsi qubeewwanii barruutiin bakka bu`u.
Qubee jalqaba hima kamuu guddisi
Yoo qubuu guddaa lama ka'uumsa "Jechaa" barreessitu qubee guddaan ittaanu ofumaan qubee xiqqaattin bakka bu'a.
Qubee jalqaba hima kamuu guddisi.
Qubeen man'ee Calc keessaa gonkumaa Ofumaan hin guddatani.
YerooURL barreessitu geessituu ofumaan uuma.
Mursaawwan bakka buusi
Murfiiwwan tokko ykn lama mursa dheeraa waliin (gabate armaan gadii ilaaali) bakka buusa.
A-B (A, iddoo, hir'ina, iddoo,B)
A-B (A, iddoo, mursa, iddoo,B)
A--B(A, iddoo,hir'ina, hir'na, iddoo,B)
A--B (A, hir'ina, hir'ina, B)
A—B (A, em-mursa, B)
(yaadannoo gabatee gadii gadii ilaali)
A-B (A, hir'ina, B)
A-B (hin jijjiiramne)
A -B(A, iddoo, hir'ina, B)
A -B (jijjiiramne)
A --B(A, iddoo, hir'ina, hir'ina, B)
A -B (A, iddoo, en-mursa, B)
Iddoowwanii fi caancalawwan bakka ka'uumsa fi dhuma keewwata haqa
Iddoowwanii fi caancalawwan bakka ka'uumsa fi dhuma keewwata haqa. Dirqaala kana fayyadamuuf, dirqalli Haalatoota Fayyadami dirqama filatamuu qaba.
Iddoowwanii fi caancalawwan tokkoon tokkoo ka'uumsa sararaa haqa. Dirqaala kana fayyadamuuf, dirqalli Haalatoota Fayyadami dirqama dabalataan filatama.
Iddoowwan dachaa gati
Iddoowwan tartiibaan lamaa fi isaaol iddoo baaqqee waliin bakka buusa
Yeroo Galchi dhuma sararaa lakkoofsa iddoo tuqaa jalqabu dhiibdu tarree lakkaa'ame ofumaan uumaan, yoo sararri murfisaan (-) jalqabe mallattoon ida'uu (+) ykn urjoo(*)iddoo fi barruun hordofame, tarreen rasaasaa yeroo Galchi dhiibduu uumama.
Lakkoofsuu ofnaa yeroo Galhi dhuma sararaa mallattoo lakkoofsa kennuun jalqabu haquuf, irra deebi'uudhaan Galchi dhiibi.
Dirqalli lakkofsa kennu ofnaa keewwattoota qofatti kanneen "Durtii" , "Qaama barruu" ykn "Qaama Galumsa Barruu" akkaataa keewwata dhanga'aniiru.
Gabatee armaan gadii sararaa arfiilee adda adda addaatti goolgaba:
Jalmura baaqqee qabxii 1.1
Sararawwan haquuf, keewwata sarara gubbaa cuqaas, Dhangii - Keewwata - Handaarawwan, jalaa fili haqi.
Barruu keessatti Sararoota Fakkasuu
Erga murfisa(-) walfaanee barreesiteen uuma ykn caancalawwan mallattoo ida'uutiin adda bahani, kanneeis: +------+---+.
Keewwattoota bakka duwwaa haqa
Haalatoota Maamiloo bakka buusi
Rasaasawwan waliin bakka buusi
Keewwatoota sarara baaqqee tarttiibaa keewwata baaqqee keessa waliin maka. Dirqalii kun keewwwatoota haalata keewwata "Durtii" fayyaduu irratti qofa dalaga. Yoo keewwat keewwata ittaanu wliin walmaka. Gatii dheerina adda addaa galchuuf, dirqala fili, ittaansuudhaa Gulaaalii cuqaasi.
Dirqala Ofsirreessaa filatame fooyyessa.